July 26, 2015	सोझै निर्बाचित प्रधानमन्त्री – यो कस्तो रहर! कसको रहर!
सोझै निर्बाचित प्रधानमन्त्री – यो कस्तो रहर! कसको रहर! राजीब दहाल
कुन बाटो रोज्ने त? अहिले एक प्रकारको प्रचार चलिरहेछ कि सोझै निर्बाचित प्रमको व्यवस्थाले स्थायित्व आउने, शक्तिशाली प्रम हुने, बिकासका काम द्रुतगतिमा हुने आदि इत्यादि। तर अन्य देशका अनुभबले यी प्रचारहरु सहि होइनन भन्ने देखाएको छ। यस्ता खालका मागहरुलाई बेलायत, भारत, जापान र थाइल्याण्ड मा अस्विकार गरिएको छ। र यी देशहरुमा संसदीय प्रजातन्त्र र संसदले प्रम चुन्ने व्यवस्थालाई नै मजबुत र सुधार गरिएको छ। हामीसग पनि यहि एउटै उपाय छ: जनताले संसद चुन्ने, संसदले प्रम चुन्ने र प्रमलाई देश, जनता र संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने। सुधार यहि ब्यबस्था भित्रै छ, र भित्रै खोजिनुपर्छ।
Posted by Rajib Dahal in Blogging Tagged: Constitution, Constitutional Debate, Directly Elected PM, Executive Elected by People, Nepali Politics
← भारतको फैसला ले नेपालको बिधुतिय कारोबार ऐन प्रभावित होला?	बार्ता को को सग कहिले सम्म गरिराख्नु पर्ने – के भन्छन हाम्रा पत्रकारहरु →
One thought on “सोझै निर्बाचित प्रधानमन्त्री – यो कस्तो रहर! कसको रहर!”	Pingback: सोझै निर्बाचित प्रधानमन्त्री – यो कस्तो रहर! कसको रहर! | kailalijobs
from April 27,2010	July 2015